Ulfaatina hir’isuun carraa kaansarii harmaan qabamuu dubartootaa hir’isa-Qorannoo – Fana Broadcasting Corporate
Ulfaatina hir’isuun carraa kaansarii harmaan qabamuu dubartootaa hir’isa-Qorannoo
Finfinnee, Fulbaana 29,2011(FBC)-Qorannoon Yuunvarsiitii Waashingitanfi Hindiyaanatti gaggeeffame akka mul’isetti ulfaatina (furdina) hir’isuun carraa dhibee kaansarii harmaaf saaxilamuu dubartootaa ni dhipphisa jedha.
Akka gabaasa Giddugala Ittisaa fi To’annootti kaansariin harmaa dhibee dubartoota miidhun beekkamuu fi dhibee kaansarii kaan irra lubbuu namaa dabrsuudha.
Qorataan qorannoo kanaa Dooktar Chelebowuskiin akka ibsetti, jijjiiramni qaama irratti mul’atu dhibee kanaaf ka’umsa ta’a.
Waggoottan kurnan lamaan darban keessatti furdinni qaamaa kaansarii harmaaf kan nama saaxilu ta’uu qorannoon kun mirkaneessee jira.
Qorannoo kanaaf Dooktar Cheleboowuskii fi gareen isaa odeeffannoo dubartoota kuma 61 fi 335 umurii 50 hanga 79 gidduu jiran dhibee kaansarii harmaan hin qabamne irraa funaanachuun seecca’aniiru.
Dubartootni kanneen turtii waggaa Sadii booda baay’en isaanii qaamni isaa dabalee jira,dhibbeentaa Shan qofatu ulfaatina qaamaa isa duraa irratti argame.
Kanneen ulfaatinni fi furdinni qaamni isaanii dabale carraan dhibee kaansarii harmaaf saaxilamuu isaanii ol kaa’eetu mul’ate.
Akka qorannoon kun agarsiisetti dubartiin ulfaatina hin barbaachifneef hin saaxilamne dhibbeentaa 12 carraan dhibee kaansarii harmaan qabamuu ishee kan ulfaatina ykn furdinaaf saaxilaman irra gadi bu’aadha.